Google Panda amin'ny Plain English | Martech Zone
Alarobia, Febroary 1, 2012 Douglas Karr
Sarotra ny hino fa ho avy isika amin'ny herintaona hatramin'ny nisintonan'i Google ny bitsika tao amin'ilay fanavaozana algorithm voalaza Google Panda. Tsy tonga izany raha tsy nisy ny sasany fanaintainana ho an'i Google ary, farany, paikady mankany sitrana avy amin'ny Google Panda.
Taorian'ny herintaona nandroahana izay heverin'i Google ho tranokala “spammy”, inona no fiantraikan'ny Panda taminao? Nisy resadresaka tsy an-kijanona teo amin'ny mpivarotra Internet sy ny SEO momba ny fomba hiarovana ny tranokalanao amin'ny Panda, saingy amin'ny fanavaozana sy fanitsiana rehetra an'ity fanovana algorithm ity dia mety hisavoritaka haingana ny raharaha.
Ity infographic, Google Panda amin'ny Plain English, mety ho iray amin'ireo infografika mazava indrindra hitako momba ny fivoaran'ny Google Panda sy torohevitra manaraka ho an'ireo orinasa izay mila manenjika mafy ny tetika fanatsarana ny motera fikarohana.
Tags: google pandaalgorithm google pandafanarenana panda googlealgorithm fikarohana google
Faly amin'ny Tinderbox ao amin'ny Super Bowl!